काबुलमा महिलालाई घरबाहिर निस्कन प्रतिबन्ध - Sano Aawaj
१२ भाद्र २०७८, शनिबार August 29, 2021 by sanoaawaj
काबुल, भदौ । अफगानिस्तानमा तालिवानले सम्पूर्ण नागरिकलाई काबुल विमानस्थल जान र महिलालाई घरबाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाएको छ । पश्चिमा फौजसँगै देश छोड्न चाहने अफगानीको संख्या बढेसँगै तालिवानले बुधबार आफ्ना नागरिकलाई यस्ता प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
अर्को एक छुट्टै प्रसंगमा तालिवानले अमेरिकी गुप्तचर निकायका प्रतिनिधिसँग गोप्य भेट गरेको विवरण उनले अस्वीकार गरे । तालिवानले गुप्तचर निकाय निर्देशकलाई सार्वजनिक रुपमै मंगलबार भेटेको उनको भनाई थियो । यसअघि सिआइएका निर्देशक विलियम बन्सले तालिवानी नेता अब्दुल गनी बरादरलाई काबुलमा गोप्य भेटेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Posted in Breaking news 1, अन्तर्राष्ट्रिय, आर्थिक, खेलकुद, ट्रेन्डिङ, ताजा अपडेट, ब्यापार, मनोरञ्जन, राजनीति, लेख /रचना, शिक्षा, समाचार, सेयर बजार, स्वस्थ्य
Prevनेकपा एमाले समाजवादी दर्ता गर्दै माधब नेपाल !
Nextकक्षा १२ को परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै गर्न निर्देशन